ဟွာဆောင်းကွင်းဆက်လူသတ်မှုများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟွာဆောင်း ကွင်းဆက်လူသတ်မှုများ (Korean: 화성 연쇄 살인 사건; Hanja: 華城連鎖殺人事件; RR: hwaseong yeonswae sarin sageon) သည် ၁၉၈၆ စက်တင်ဘာ ၁၅ နှင့် ၁၉၉၁ ဧပြီ ၃ ရက်အကြား တောင်ကိုရီးယား ဟွာဆောင်းမြို့တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော မဖြေရှင်းနိုင်သေးသည့် လူသတ်မှုများဖြစ်သည်။ ကျူးလွန်သည့်အခါတိုင်း အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် မိန်းကလေးငယ်များအား တုပ်နှောင်သတ်ဖြတ်ထားသည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ခေတ်နှောင်းသမိုင်းတလျောက် အကျော်စော်ဆုံး လူသတ်မှုများ ဖြစ်ပြီး ရာသီခွင်လူသတ်သမား ၏ ကျူးလွန်မှုနှင့် ခိုင်းနှိုင်းခံရသည်။
၃ မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြခြင်း
ဂျုံးဂီစီရင်စု ဟွာဆောင်းနယ်မြို့လေး၌ ၄ နှစ်နှင့် ၇ လအတွင်း အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၇၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတို့ ပါးစပ်ဆို့ ၊ မတရားကျင့်ပြီး အသတ်ခံရသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အဝတ်အစားဖြင့်ပင် အသက်ရှုကြပ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး အသတ်ခံ ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျူးလွန်သူမှာ အရပ်အမြင့် ၁၆၅ မှ ၁၇၀ စင်တီမီတာ ၊ သွေးအုပ်စု ဘီ ပိုင်ရှင် အသက် ၂၀ တွင်းရှိ အမျိုးသားဟု မှုခင်းဆေးပညာ သက်သေအထောက်အထားများအရ သိရသည်။
လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ထား သတ်ဖြတ်မှုများအား ပထမဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့် အမှန်တကယ်သေချာပိုင်းဖြတ်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ ကိုရီးယား၌ နာမည်ကျော်ခဲ့သည်။ ရဲအရာရှိများမှာ လူအလုပ်ရက်ပေါင်း ၂ သန်း ကြာအောင် ဤအမှုအား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သံသယရှိခံရသူအရေအတွက်မှာလည်း တိုးပွားလာရာ အဆုံး၌ ၂၁၂၈၀ ဦးအထိ ရှိလာခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ဇူလိုင် အမျိုးသားညီလာခံက ဖယ်ရှားလိုက်ချိန်အထိ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ လူသတ်မှုအတွက် statute of limitations မှာ ၁၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ဧပြီ ၂ တွင် သတ်ဖြတ်မှုအတွက် ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည်။ သို့သော် အမှု၏ ထင်ရှားကျော်စော်မှုကြောင့် ရဲမှတ်တမ်းများအား ဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ပြဋ္ဌာန်းချက် ကို ဖယ်ရှားလိုက်သည့်အတွက် သွေးအေးသွားသောအမှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။
၂၀၀၄ တွင် ကောလိပ်ကျောင်းသူတဦးအသတ်ခံရသဖြင့် ဟွာဆောင်း ကွင်းဆက်လူသတ်မှုများအား စိတ်ဝင်စားမှုများ ပြန်လည်အစပျိုးလာခဲ့သည်။ ယင်းအမှုမှာလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
၁၉၈၆ စက်တင်ဘာ ၁၅ ဟွာဆောင်း ၊ အန်ယောင်း-ရီ (ယခု ဟွာဆန်း-ဒုံ) စားကျက်ကွင်း လီဝမ်-အင်းမ် (၇၁ နှစ်) Statute of limitations expired on September 15, 2001, at 12 am.
၁၉၈၆ အောက်တိုဘာ ၂၀ ဟွာဆောင်း ၊ ဂျီနန်း-ရီ (ယခုဂျီနန်း-ဒုံ) တူးမြောင်း ပါခ့် ဟျွန်ဆုခ် (၂၅ နှစ်) Statute of limitations expired on October 19, 2001, at 12 am.
၁၉၈၆ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ဟွာဆောင်း ၊ အန်ယောင်း-ရီ (ယခု ဟွာဆန်း-ဒုံ) ကမ်းပါး Kwon ဂျူဘုံ (၂၅ နှစ်) Statute of limitations expired on December 11, 2001, at 12 am.
၁၉၈၆ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ဂျောင်နမ်-မြောင်, ဂွမ်ဟန်း-ရီ တူးမြောင်း Lee Kye-sook (23 years old) Statute of limitations expired on December 13, 2001, at 12 am.
၁၉၈၇ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ဟွာဆောင်း ဟွမ်ဂိုင်း-ရီ (ယခု ဟွာဆန်း-ဒုံ) လယ်ကွင်း ဟွန် ဂျင်-ယောင်း (၁၉ နှစ်) Statute of limitations expired on January 9, 2002, at 12 am.
၁၉၈၇ မေ ၂ ဟွာဆောင်း ၊ ဂျီနန်-ရီ (ယခု ဂျီနန်ဒုံ) တောင် ပါ့ခ် အွန် ဂျူး (၂၉ နှစ်) Statute of limitations expired on May 1, 2002, at 12 am.
၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၇ ပါလ်တန်မြောင် ၊ ဂါဂျေး-ရီ တူးမြောင်း အန် ဂီဆွန်း (၅၄ နှစ်) Statute of limitations expired on September 6, 2003, at 12 am.
၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၆ ဟွာဆောင်း ဂျီနန်-ရီ (ယခုဂျီနန်-ဒုံ) နေအိမ် ပါ့ခ်ဆန်းဟီး (၁၄ နှစ်) ၁၉၈၉ ဇူလိုင် ၂၇ တွင် ယွန်းမို (၂၂ နှစ်) အားဖမ်းဆီးခဲ့။
၁၉၉၀ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ဟွာဆောင်း ဗျောင်ဂျမ်းဒုံ (ဗျောင်ဂျမ်း ၁(အီလ်)-ဒုံ) တောင်ကုန်း ကင်မ် မီဂျွန်း (၁၄နှစ်) Statute of limitations expired on November 14, 2005, at 12 am.
၁၉၉၁ ဧပြီ ၃ ဒုန်တန်း-မြောင် ၊ ဘန်ဆုန်း-ရီ (ယခု ဒုန်တန်း ၁ - ဒုံ) တောင်ကုန်း Kwon ဆုန်းဆန်း (၆၉ နှစ်) Statute of limitations expired on April 2, 2006, at 12 am.
ဤလူသတ်မှုများအပေါ် အခြေတည်၍ ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းများစွာ ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
Memories of Murder (၂၀၀၃)
Confession of Murder (၂၀၁၂)
Criminal Minds (၂၀၁၇)
Partners for Justice (၂၀၁၈)
↑ Kyung-Hyun Nam (2006-04-01)။ Hwaseong Killings Still Baffle Police။ english.donga.com။ 2015-09-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Cho၊ Seongyong (2012-05-23)။ A South Korean "Zodiac"။ RogerEbert.com။ 2015-09-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ “화성사건은 아직 끝나지 않았다” 당시 담당형사 책펴내 (in Korean)။ DongA Ilbo (2003-09-08)။ 2016-03-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “연인원 200만명의 경찰이 투입됐고...”
↑ ၄.၀ ၄.၁ 화성연쇄살인사건 ‘살인의 추억’ 으로 묻히나 (in Korean)။ The Hankyoreh (2006-04-01)။ 2016-03-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hwaseong Fears Return of Serial Killer။ english.chosun.com (2007-09-01)။ 2015-09-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hwaseong serial murders victims။ May 13, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Julie Jones (2015-08-26)။ More Writers And Actresses Opt For Cable Dramas။ KDramaStars။ 2015-09-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟွာဆောင်းကွင်းဆက်လူသတ်မှုများ&oldid=477317" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၃:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။